Mwari Akatanga Riini Kusika Denga Nenyika? — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
ijwbq nyaya 173
Mazuva 6 ekusika aiva mazuva ane maawa 24 here?
Zvinotaurwa muna Genesisi zvinoenderana nezvinotaurwa nesainzi here?
Zuva, mwedzi, nenyeredzi zvakasikwa riini?
Maererano nezvinotaurwa muBhaibheri, nyika yava nemakore mangani yasikwa?
Sayenzi Inopikisa Nhoroondo Iri Muna Genesisi Here?
Bhaibheri haritauri kuti Mwari akatanga riini kusika denga nenyika uye kuti zvakatora nguva yakareba sei. Rinongoti: “Pakutanga Mwari akasika denga nenyika.” (Genesisi 1:1) Bhaibheri haritauri kuti “pakutanga” pacho ndepapi. Asi maererano nezvinotaurwa muna Genesisi, denga nenyika zvakasikwa “mazuva” 6 ekusika asati atanga.
Zvii zvakaitika mumazuva 6 ekusika?
Aiwa. MuBhaibheri shoko rekuti “zuva” rinogona kureva nguva yakareba zvakasiyana-siyana zvichienderana nezvinenge zvichitaurwa. Semuenzaniso, imwe ndima inotaura nezvenguva yese yakasikwa zvinhu sezuva rimwe chete.—Genesisi 2:4.
Mwari akaita kuti nyika ‘yakanga isina kugadzirwa, uye yakanga isina chinhu’ ikwanise kugarwa nevanhu. (Genesisi 1:2) Akazosika zvinhu zvipenyu zviri panyika. Bhaibheri rinotaura nezvezvinhu 6 zvakaitika mumazuva ekusika:
Zuva 1: Mwari akaita kuti chiedza chivheneke panyika, zvikaita kuti pave nemasikati neusiku.—Genesisi 1:3-5.
Zuva 2: Mwari akaita kuti pave nenzvimbo huru inoparadzanisa mvura iri panyika nemvura iri kudenga.—Genesisi 1:6-8.
Zuva 3: Mwari akaita kuti pave nepasi pakaoma. Akasikawo zvinhu zvinomera.—Genesisi 1:9-13.
Zuva 4: Mwari akaita kuti zuva, mwedzi, nenyeredzi zvioneke panyika.—Genesisi 1:14-19.
Zuva 5: Mwari akasika zvisikwa zvemumvura nezvisikwa zvinobhururuka.—Genesisi 1:20-23.
Zuva 6: Mwari akasika mhuka dzepanyika nevanhu.—Genesisi 1:24-31.
Pakapera mazuva 6, Mwari akazorora pabasa rake kana kuti akamira kusika.—Genesisi 2:1, 2.
Nhoroondo yeBhaibheri yekusikwa kwedenga nenyika haisi tsanangudzo yakadzama yesainzi. Asi itsanangudzo iri nyore zvekuti kunyange vanhu vekare vaigona kunzwisisa kuti Mwari akatanga kusika chii. Nyaya yekusikwa kwakaitwa zvinhu haipesani nezvinotaurwa nesainzi. Mumwe sayendisti anonzi Robert Jastrow akanyora kuti: “Matsanangurirwo anoitwa nyaya yacho akasiyana, asi zvinotaurwa nesainzi uye zvinotaurwa neBhaibheri nezvematangiro akaita upenyu zvine pazvakafanana; zvese zvinoratidza kuti pane pakatangira zvinhu kuvapo zvichizoguma nekuvapo kwemunhu.”
Zuva, mwedzi, nenyeredzi zvakavapo sechikamu ‘chedenga’ rakasikwa “pakutanga.” (Genesisi 1:1) Asi chiedza chazvo chaitadziswa kusvika panyika nemhepo yakanga yakaipoteredza. (Genesisi 1:2) Kunyange zvazvo chiedza chishoma chaivheneka panyika pazuva rekutanga, chaisaoneka kuti chaibva kupi. Pazuva rechi4, kunenge kuti mhepo yakanga yakapoteredza nyika yakanga isisina kunyanya kuwanda. Bhaibheri rinotaura kuti zuva, mwedzi, uye nyeredzi zvakatanga ‘kuvhenekera nyika,’ richitsanangura maonerwo azvaizoitwa nemunhu ari panyika.—Genesisi 1:17.
Bhaibheri haritauri kuti nyika yava nemakore mangani. Genesisi 1:1 inongotaura kuti denga nenyika zvine pazvakatangira. Izvi hazvipikisani nezvinotaurwa nesainzi kana kuti zvinofungidzirwa nemasayendisti panyaya yekuti nyika yava nemakore mangani yasikwa.